“အတွေးစလေးတွေ”: အစိမ်းရင့်ရောင် အလွမ်း ( ၄ ) . . .
Posted by Han Kyi at 9:46:00 am
ဒီတစ်ခါလဲ ဘာကို ညာကို စိတ်နာလို့ ဆိုပြီး ဆရာဝန်အဖြစ်ကို ရာသက်ပန် စွန့်လွှတ်ပြီး ကလေးတွေကို စာပြပေးတဲ့ နာသုံးနာ စာသင်ဆရာဘဲ လုပ်ဖြစ်နေတော့တယ် ဆိုပြီးတော့လေ။း)
သူကြီးမှန်းရင်တော့ လွှဲခဲတယ်နော့။ ဟာ ဟ။
ဒီဝထ္ထုရေးတော့ သားသားအလေးပဲ ရှိပါသေးသဗျာ...ကျောင်းသားဘ၀က ရေးထားဖြစ်တာပါ...ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါပြီး စာသင်စားနေရတာကတော့လည်း ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တယ် မပြောတတ်တော့ဘူး...
နောက်တစ်ပိုင်းကျရင်တော့ အပြီးသတ်အမြန်တင်မှ...ကြာရင် သူကြီးလက်ချက်နဲ့ အိမ်ရှင်မကပါ ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ထင်လာရချည်ရဲ့...
ဟီဟီ ဆရာ ဇာတ်ကွဲပြီထင်တယ်.
ဇာတ်ရှိန်တော့ တက်လာပြီ ဆရာ
အပိုင်း(၄) တင်မလားလို့ စောင့်စားရင်းနဲ့ . . .
အပိုင်း(၅) ကိုလည်း စောင့်စားနေပါတယ် ဆရာ
9 April 2012 at 20:47
တခါတည်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူး.. အဲဒီဆရာဟန်ဟာလေ... ကူးရုံပဲဟာကို.... တကတည်း.. ညဉ်းဆဲတတ်ပါပေ့... :P
ဆရာ့အရေးအသားလေးတွေသိပ်လှတယ်...။ ဇာတ်ရှိန်ကအရမ်းကိုဆွဲခေါ်နေပြီ...အပိုင်း၅မြန်မြန်တင်ဗျာ...။ အလွမ်းနဲ့ပဲဇာတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပြီးသားပါ...။ ကြိုက်တယ် မိုးငွေ့က အလွမ်းကိုပိုနှစ်သက်သူကိုးးး...။
တဂျီးမင်းကတော့ တတ်လည်းတတ်နိုင်ပါ့..ဘယ်လိုသိမ်းမလဲ သိချင်လိုက်တာ ဆရာဟန်ရေ